Simplest Happiness Izithombe Zentengiso - Umagazini Design
Izithombe Zentengiso Ku-zodiac yaseChinese, u-2019 ngunyaka wengulube, ngakho-ke u-Yen C waklama ingulube esisikiwe, futhi uyi-pun kuma "movie amaningi ashisayo" ngesiShayina. Izinhlamvu ezijabule zihambisana nesithombe sesiteshi kanye nemizwa ejabule isiteshi esifuna ukunika izithameli zayo. Ividiyo iyinhlanganisela yezinto ezine zama-movie. Izingane ezidlalayo zingakhombisa kangcono injabulo emsulwa, futhi nginethemba lokuthi abalaleli bazoba nomuzwa ofanayo wokubuka imovie.
Igama lephrojekthi : Simplest Happiness, Igama labaklami : Yen C Chen, Igama leklayenti : Fox Movies.
Izithombe Zentengiso Yen C Chen Simplest Happiness